Dayaca ka yimid dhanka dowladda oo sabab u noqday in halmar 9 qof Covid19 ay Martiini ugu dhintaan. – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Dayaca ka yimid dhanka dowladda oo sabab u noqday in halmar 9 qof Covid19 ay Martiini ugu dhintaan.
Allhadaaftimo April 27, 2020 April 27, 2020 Uncategorized
Waxaa la soo sheegayaa in daryeel la’aan daran ka jirto Isbitaalka Martiini oo ay ku jiraan bukaanada qaba cudurka COVID-19, xalay oo kaliya 9 ruux ayaa ku geeriyootay Isbitaalka, kuwaasoo qaarkood neef qabatin u dhintay.
Sida la xaqiijiyay Xalay Isbitaalka waxaa ka maqneyd korontada muddo saacado ah taasi oo sababtay inay shaqeyn waayaan Mashiinadii Oxygen-ka ee bukaanada neefta siinayey,taasi oo sida muuqata ah dayacaad xooggan oo isbitaalka ka jirta.
Waa Nasiib darro in arintaas ay dhacdo waana halis weyn oo ay wajahayaan bukaanada isbitaalka lagu xareeyey oo markii horeba aan loo dajin siyaasad lagu maareeyo xaaladooda caafimaad.
Waxaa haboon in Koronto joogto ah loo helo isbitaalka dadka ku jira,si aysan ugu neef-qabatoobin bukaanadu markii Korontadu danto,Wasaaradda caafimaadku waa inay muujisaa taxadar oo aysan yareysan xaaladda dadka bukaanada ah ee gacanta ay ku hayso oo doorkeedu uusan kusoo koobmin wacyigalinta dadka caafimaadka qaba.
Previous Mid kamid ah belaha daga deganada jubaland oo shir aayo katalinta besha ku qab saday magalada kismayo
Next 63 xildhibaan ayaa xalay saqdii dhexe aya mowshin ka gudbiyeen gudoomiyaha barlamaanka hirshabelle